Degmada Qoryooleey ee gobalka shabeelada hoose ayaa waxaa lagu qabtay saraakiil ka tirsan al-shabaab – STAR FM SOMALIA
Maamulka Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegaya inay gacanta ku dhigeen Saraakiil ka tirsan Ururka Al Shabaab, kuwaasi oo watay gaari yar.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka ammaanka Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha hoose Cabdi Axmed Cali, ayaa sheegay howlgal ciidamada ay ka sameeyen duleedka Degmada Qoryooleey inay ku qabteen Saraakiil Shabaab ka tirsan.
Saraakiishaan ayaa watay gaari nuuciisa uu yahay Sur/Runeyd, waxaana Maamulka uu sheegayaa inay ku wareejinayaan Dowladda Somaliya si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado.
Inkastoo Maamulka Degmada Qoryooleey aysan sheegin magacyada Saraakiishaan ayaa hadana Guddoomiye ku xigeenka dhanka ammaanka Degmada Qoryooleey, wuxuu sheegay labadan Sarkaal inay kala ahaayeen ninkii soo abaabulay Qaraxii lagu gooyay Buundada Qoryooleey iyo Sarkaalkii Shabaab u qaabilsanaa Sako aruurinta aaga Qoryooley.
Howlgalka raggaan lagu qabtay oo laga sameeyay duleedka Magaalada Qoryooley ayuu sheegay Guddoomiye ku xigeenka inay sii wadi doonaan, si ay u soo qab qabtaan Shabaabka deeganadaasi ku dhuumaalaysanaya.
Majirto ilo ka madaxbanaan maamulka Degmada Qoryooleey oo xaqiijinaya ciidamada Dowladda inay qabteen labadan Sarkaal ee Shabaabka ka tirsan.
Bannaanbaxyo looga soo horjeedo gabadhii Somaliyeed ee laga celiyay dalka Australia ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka Sydney iyo Melbourne